Shil Gaari oo sababay dhimasho oo ka dhacay Afaafka dekeda magaalada Kismaayo – SBC
Shil Gaari oo sababay dhimasho oo ka dhacay Afaafka dekeda magaalada Kismaayo
Posted by editor on Apriil 27, 2011 Comments
Ksimaayo- Hal Qof ayaa geeriyooday 2 kalena waa ay dhaawacmeen ka dib markii shil gaari uu ka dhacay Afaafka hore ee Dekeda weyn ee magaalada Kismayao .
Shilkan ayaa yimid ka dib markii ay isku dheceen laba gaari oo mid ka mid ahi uu siday xamuul islamarkaana uu ka soo baxay dekeda, halka midka kalena uu ahaa nooca looyaqan Hoomeyda waxaanu xiligaasi sii galayay Dekeda .
Halka Qof ee geeriyooday ayaa isagu waxa uu marayay wadada halka 2da kalena ay ka mid ahaayeen dadkii saarnaa gawaarida isku dhacday .
Dhaawaca ayaa la gaarsiiyay isbitalka weyn ee Kismaayo halkaas oo lagu dabiibayo .
Ciidamada taraafikada wadooyinka Kismaayo oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in ay soconayaan baaritaano ay ku ogaanayaan waxyaabaha sababay shilkan khasaaraha dhaliyay, waxaana ay sheegeen in ay gacanta ku hayaan wadayaashii gaadiidka isku dhacay .
Sikastaba ha ahaatee dhacdooyinka ceynkan oo kale ah ayaa waxa ay yihiin kuwo ku soo badanaya magaalada Kismaayo, waxaana ay aheyd mudo yar ka hor markii 2 gaari ay shil ku galeen aaga dekeda weyn ee Kismaayo islamarkaana uu ka dhashay khasaare Naf iyo maalba leh.